SAWIRRO Archives - Page 2 of 3 - Sawirrotv
SAWIRRO – Maleeshiyaad ay Shabaab soo…
Xoogaga Al Shabaab ayaa toddobaadkii hore dib ula wareegay gacan ku haynta Deegaanka Galcad, ka dib markii ay isaga baxeen Ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah Amisom, iyadoo kolkaasi ka dibna ay ka baxeen Ciidamadii Dowladda.
SAWIRRO – Shirkii IGAD ee Muqdisho ka Dhacay
Madaxweyneyaasha urur gobooleedka IGAD ayaa maanta shirkii madaxeedkoodii 28aad ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaana shirkan uu ahaa mid taariikhi ah oo wax ka badelidoona indhaha uu caalamka u fiiriyo dalka Soomaaliya.
SAWIRRO – Isbedelka Garoonka Aaden Cadde
Mashquul aad u badan ayaa xagaagan laga dareemaa garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo ay soo gaarayaan diyaarado waaweyn oo sida qurba joog dalkooda u soo dalxiis tegay, waxaana garoonka gudihiisa laga sameeyay dhismooyin badan oo kor u qaaday bilicda uu garoonkaasi yeelanayo.
SAWIRRO – Qaraxii Kadhacay Gaalkacyo
Qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada ayaa la sheegayaa inay ahaayeen kuwo aad u xoogan, iyadoo burburka guryaha uu gaaray goobo ka fog meeshii uu qaraxaasi ka dhacay.
SAWIRRO – Isbedellada Dekedda Muqdisho
Dib u dhiska lagu soo kordhiyay Dekeda ayaa ka mid ah darbiyo dhaadheer oo laga hirgeliyay dhamaan xeyndaabka Dekeda iyo albaabka cusub ee dekedda Muqdisho oo looyeelay miisaan iyo scan-mashiin oo loogu tala galay in lagula socdo badeecadaha Dekeda ka soo baxa iyo kuwa galaya.
SAWIRRO – Hor’umarka Magaalada Baydhabo
Magaalada Baydhabo, waxa ay kamid tahay Magaalooyinka ugu Faca Weyn dalka Soomaaliya, Magac ahaan dadka Soomaaliyeed waxa ay ku hal qabsadaan ”Baydhabo Janaay” waxayna safka hore uga jirtaa magaalooyinka ugu dadka badan ee Soomaaliya.
SAWIRRO – Maanta Caawa iyo Muqdisho
Halkan hoose ka daawo sawirradii maanta iyo Caawa laga soo qaaday Caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho, (some random picture’s from the Capital Mogadishu).
SAWIRRO – Madaxweynaha oo Booqaday Liido
Booqashada Goobahani ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehliyay Masuuliyiin ka tirsan Dowladda federaalka, wuxuuna dabaaldagga Maalinta Ciidul Fitriga kala qeybqaatay boqolaal dadweyne ah oo ku damaashaadayay Xeebta Liido ee maagalada Muqdisho.
SAWIRRO – Xafladii Afurka ee Xarunta Xalane
Ambassador, Francisco Madeira oo ah madaxa Ciidamada Midowga Africa u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa xalay waxa uu Casho sharaf u qabtay taliyeyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
SAWIRRO – Xafladda Maalinta 1-da July (2016)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu danbeyn goobta ka hadlay ayaa hambalyo ku aadan xuska 1-da Luulyo u diray dhammaan Ummadda Soomaaliyeed meel walbo oo ay dunida ka joogaan, wuxuuna sheegay in Dowladdu ay ka shaqeyneyso ilaalinta midnimada Ummadda Soomaaliyeed shacabkana looga bahanayahay inay dowladda ku tageeraan arrintaasi.